कछुवाको तालमा मृगको शिकार - Limbuwan khabar
कछुवाको तालमा मृगको शिकार
बिहिबार, २४ असार, २०७८ रातीको ०८:५४ बजे, लिम्बुवान न्युज
नेपाल दक्षिण पूर्वी एसियाको एक भुपरिबेष्ठित राष्ट्र हो । नेपालको पूर्व, दक्षिण र पश्चिममा भारत छ भने उत्तरमा गणतन्त्र चीन छ । भारतसँगको सम्बन्ध भौगोलिक अवस्थितिले सहज, सरल र अनुकुल छ भने चीनसँगको असहज र प्रतिकूल छ । नेपाल एक असंलग्न राष्ट्र भएकोले भारत र चीन दुबैसँगको सम्बन्धमा पञ्चसीलको सिद्धान्त अनुसार समान भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालको भु–राजनैतिक परिस्थितिले आदिम कालदेखि भारतसँगको सम्बन्ध जति सतहीबाट लचिलो छ त्यति चीनसँग छैन । चीन आफूलाई विश्व शक्तिराष्ट्रको रुपमा परिचित गर्न चाहान्छ । विश्वमा उदयमान शक्ति राष्ट्र भारतसँग काउन्टर गर्न चीन नेपालमा दर्बिलो उपस्थिति कायम गर्न चाहान्छ । चीन आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्दै व्यापार वृद्धि गर्न र आफू अनुकुलको आन्तरिक र बाह्य वातावरण कायम गर्न नेपाललाई रणनैतिक ढोका (Strategy Door) को रुपमा राख्न र प्रयोग गर्न चाहन्छ ।
चीनको “वान बेल्ट वान रोड” अवधारणा अनुसार नेपालमा विभिन्न परियोजना भित्रिएका छन् । नेपालमा चीनको प्रत्यक्ष लगानीमा निर्माण गरिने भनिएको परियोजना “चीन नेपाल मैत्री पार्क (दमक क्लिन पार्क) हो । झापा जिल्लाको दमक नगरपालिका,कमल गाउँ पालिका र गौरादह नगरपालिका को सङ्गम पारेर निर्माण गरिने भनिएको चीन नेपाल मैत्री पार्क पनि चीनको दक्षिण पूर्व एशियामा आफ्नो सक्ती फैलाउने रणनैतिक ढोका ( Strategy Door) हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। सुरुमा राम्रा राम्रा लक्ष र उद्देश्य बताएर प्रवेश गर्ने र कालान्तरमा त्यसैलाई हतियार बनाउन सक्ने प्रबल सम्भावना हुन सक्छ ।
तत्कालीन श्रीलंकाका राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेको आग्रहमा चीन सरकारले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बंदरगाह बनाउने सम्झौता भयो । शुरुशुरुमा श्रीलंकाली जनतालाई मिठो सपना र लोभमा पारेर राजापाक्षेले चीनसँग उक्त सम्झौता गरे । हाम्बन् टोटा नाम दिइएको उक्त बंदरगाहले श्रीलंङ्कामा ठूलो बहस र चर्चा पाएको थियो । चीनको सरकारी कम्पनी “हार्वर इन्नजिनियरी कंपनी”ले निर्माण गरेको उक्त बन्दरगाह १५०० एकर्ड क्षेत्रमा फैलिएको छ र १८ नोवेम्बर २०१० मा यो बंदरगाह खुल्ला गरिएको थियो । चीनको आर्थिक ऋण लगानीमा निर्माण गरिएको उक्त बंदरगाहलाई राष्ट्रपति राजापाक्षेले आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ सिद्धिमा जोडें । आफूले चुनावमा जनमत जित्नको लागि चीनलाई बन्दरगाहको लगानी माध्यमबाट भित्र्याई श्रीलंङ्कामा ब्रम्हलुट नै मच्चाए । चीनको ठूलो ऋण लगानी रहेकोले उक्त ऋण तिर्न नसकी श्रीलंङ्का सरकारले “हाम्बन् टोटा” बंदरगाह ९९ वर्षको लागि चीनलाई बुझाउन बाध्य भयो । आखिर चीनको गोप्य रणनीतिक योजना (Strategy Door) सफल भएको विश्लेषण गरिन्छ ।
चीन अत्यन्त चतुर, सुरक्षित र गोप्य तरिकाले आफ्नो रणनीति प्रयोग गर्दै नेपालको बाटो प्रयोग गरी भारतको बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन चाहान्छ । दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकमा नेपाल चीनको पहिलो पर्यटकिय गन्तब्य राष्ट्रको रूपमा रहेको छ र त्यसैको रणनैतिक योजनामा नै वान बेल्ट वान रोड परियोजना अन्तर्गत चीन नेपाल मैत्री पार्क आएको हुन सक्ने सम्भावना रहेको नेपालका जानकारहरु बताउछन् ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्दा राष्ट्रिय आम सहमति र स्थानीयको अर्थपूर्ण सहभागिता जुटाउनु अति आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रिय सहमति बेगर हचुवाको भरमा र चुनावी अभिमत बटुल्ने अभिप्रायले जबर्जस्ती लाद्न खोजिएको गौरबको आयोजना कागजमा र शिलान्यासमा मात्र सीमित रहन सक्छ । त्यस्तै चीन नेपाल औद्योगिक मैत्री पार्क पनि विभिन्न समस्यामा अल्झिएको छ । यो पार्क पनि राजापाक्षेको जस्तै मत अभिमत बटुल्न आएको “हाम्बन् टाटा” जस्तै त हुने होइन ? त्यसैले ‘सिउनेले लाउनै पाउँदैन लाउनेले देख्नै पाउँदैन’ भने जस्तै संझौता गर्नेले यो पार्कको असली रुप देख्नै पाउँदैन र देख्नेले भोग्नै पाउँदैन की ..!
लेखकः संघीय लिम्बुवान मञ्चका उपमहासचिव हुन्